प्लास्टिक कन्टेनर को एक किसिम बाट: बोतल, बक्स, खाना अन्तर्गत देखि प्याकेजहरू - तपाईं रोचक उपयोगी र सुन्दर शिल्प को धेरै बनाउन सक्छ। प्लास्टिक सस्ती छ, र अक्सर जो एक सुखद र सस्तो हात बनाएको उत्पादनहरु को लागि एक उपभोज्य सामाग्री रूपमा यसको प्रयोग बनाउँछ, वस्तुतः निःशुल्क हामीलाई लागत। सबै असामान्य शिल्प को निर्माण को लागि आवश्यक छ - राम्रो मुड र एक सानो कल्पना छ। यस लेखमा हामी तपाईंलाई कसरी "उलनेबुला" भनिन्छ प्लास्टिक बोतल देखि शिल्प सिर्जना गर्ने विचार साझेदारी गर्न चाहन्छु। यो मुश्किल छैन, र आफ्नो रचनात्मकता को परिणाम तपाईं र तपाईंको प्रियजनलाई प्रसन्न हुनेछ!
प्लास्टिक बोतल देखि उल्लू: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
यो सजावटी आभूषण बनाउन तपाईं सामाग्री को एक किसिम आवश्यक हुनेछ:
पारदर्शी प्लास्टिक 2-लीटर बोतल;
स्टेपल बन्दूक ;
यो केन्द्रीय भाग मा एक "कमर" भइरहेको एक पर्याप्त ठूलो प्लास्टिक बोतल चयन गर्न उचित छ। तसर्थ, हामी सिर्जना गर्न थाल्छन्।4unequal भागमा कन्टेनर विभाजन रेखा3आकर्षित,: बोतल गणना मार्कर मा बनाउन। 10-12 सेमी, तल माथि 10-12 सेमी मा तेस्रो - पहिलो लाइन2सेमी ढक्कन तल, दोस्रो मा स्थित गर्नुपर्छ। को योजना रेखाहरू अनुसार कन्टेनर कटौती। सबै भन्दा कम र घाँटी तलको एक - शिल्प लागि चार दुई भागहरु आवश्यक हुनेछ। अन्य टुकडे सुरक्षित छोड्न। कन्टेनर तल चरा टाउको रूपमा सेवा, र "टिप" हुनेछ - शरीर। अब एक स्ट्यापलर को मद्दतले सही दुई टुक्रा बन्धन। अब प्लास्टिक बोतल देखि उल्लू आफ्नो शरीर प्राप्त गरेको छ। काम को दोस्रो चरण रंग को प्रयोग हो। तिनीहरूले एक प्लास्टिक सतह मा पूर्ण गिरावट रूपमा, उत्पादन डिजाइन, एक्रिलिक खरिद गर्न उचित छ। प्लास्टिक बोतल देखि शिल्प "उलनेबुला" कसरी रंग गर्न? फोटो सम्भव विकल्प देखाउँछ। निस्सन्देह, तपाईं कल्पना देखाउन र आफ्नो अद्वितीय रंग चरा बनाउन सक्छ। लागू गरेपछि रंग उत्पादन राम्रो ड्राई दिनुहोस्। आफ्नो सबै Hack लगभग तयार छ!
तपाईं कोठा मा उल्लू राख्न योजना भने, तपाईंले आफ्नो चरा घर वा twigs, पाइन र को roost लागि बनाउन सक्छ स्प्रूस शंकु, पहाड खरानी र viburnum को जामुन। यो संरचना को विशेष आकर्षण पहेंलो, रातो, क्रिमसन वा सुन्तला पात थप्नेछ। प्लास्टिक बोतल देखि मूल लेख जस्तै कुनै पनि घर सजाउनु। उल्लू अब तपाईं रम्न र आफ्नो घर मा एक विशेष सुखद वातावरण सिर्जना गर्नेछ। आकर्षक बर्ड सबै घरपरिवारले को ध्यान आकर्षित गर्न, आफ्नो घर मा ठाँउ को गर्व लाग्छ।
प्लास्टिक बोतल तपाईंको उल्लू सजावट उपनगरीय क्षेत्र वा बगैचा को लागि अभिप्रेरित भने, तपाईं निर्धारण गर्न आवश्यक छ। शिल्प को तल एक AWL संग केहि प्वालहरू बनाउन र सुतली मार्फत तिनीहरूलाई पारित। अब तपाईंको सौन्दर्य एक रूख को कुनै पनि ट्रंक संलग्न वा शाखा मा राखिएको गर्न सकिन्छ। सबै - प्लास्टिक तयार बोतल देखि प्यारा उल्लू! तपाईं यस्तो बगैचा आभूषण कुनै ठूलो सम्झौता हो को निर्माण मा हेर्नुहोस्। आफ्नो बच्चा संग प्लास्टिक बोतल देखि एक Hack "उलनेबुला" सिर्जना गर्न प्रयास गर्न निश्चित हुनुहोस्, यो एक रचनात्मक र मनोरंजक सोख गर्न अपील गर्नेछ। हामी तपाईंलाई सबै सही बाहिर गरिएका छन् भन्ने आशा!
विभिन्न तरिकामा आफ्नो हातले अफीम कपडा बनाउन
टायर को एक पट कसरी गर्न?
आफ्नो हातले वसन्त मा छोराछोरीको शिल्प
के vermouth पिउन? के पेय vermouth "Bianco"
यात्रा एजेन्सी "रवि समुद्र": समीक्षा
Auslogics boostspeed। कार्यक्रम बारे प्रतिक्रिया
कोदो र भात multivarka मा porridge "पोलरिस"
जीवनी अल Pacino: अभिनेता को रचनात्मक तरीका
ठूलो उत्पादन - उसिनेर बीट। यसको अत्यन्तै सानो क्यालोरी!
"पिघला परिधि" मिनी-श्रृंखला। अभिनेता र भूमिकाको